sarrifka crypto Indian Coinsecure jabsaday - Blockchain News
sarrifka crypto Indian Coinsecure jabsaday
Coinsecure, an exchange cryptocurrency Indian, ayaa sheegay in ku dhawaad ​​$ 3M ayaa laga xaday ay jeebka Seeraar, sheegay weyn ee ilaa iyo haatan suuqa lacagta digital ee dalka.
Coinsecure, taas oo uu leeyahay in ka badan 200,000 users Ganacsi ee ay madal maalin kasta, ayaa sheegay in ku dhawaad ​​in 438 Bitcoins, kuwaasi oo ay ku kaydsan jeebka dalwaddii password-ilaaliyo ah ayaa shalay asayda halka aan la garanayn oo internetka ka dib faahfaahin ah ayaa la xaday online.
"Waxaan ka xumahay in aan idinla socodsiiyo in lacag Seeraar our la kulantay oo u muuqdaan in ay uu shalay asayda u soo baxay cinwaanka ah in uu yahay meel ka baxsan gacanta ku our,"Shirkadda yiri hadal uu soo qoray boggiisa internetka.
Coinsecure ayaa sheegay in ay mag lahaa macaamiisha khasaaraha ka lacagaha ay hadda jira.
Cabbircawl Investment ...
Payment karbaash operator diido Seeraar
Processor Payment St ...
Seeraar ayaa dhawaan waxay ahayd ...
Post Previous:Aqoonyahan Islaamka ayaa sheegay Seeraar waafaqsaneyn sharciga shareecada
Post Next:Germany ee No. 2 qorshayaasha stock exchange for hordhaca ah ee Trading Crypto ku App